Kuboshwe nommeli kweletulo lokusocongwa kobeyimeya - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe nommeli kweletulo lokusocongwa kobeyimeya
Kuthiwa abasolwa bese bekhuthazwe ngo-R500 000 ku-1 million abebezowuthola
UNOBHALA we-ANC esiFundeni iFar North, uMnu Thobelani Ncamphalala engaphandle kwenkantolo eMtubatuba, lapho bekuvele khona abasolwa ngokuhlanganisa itulo lokumbulala. ISITHOMBE NGU: NOMFUNDO NGWANE
NONHLAKANIPHO SHINGA noPHUMLANI GAMA
KUKHONA nommeli kwabesilisa abathathu abebevele eNkantolo yesiFunda yaseMtubatuba ngoLwesine mayelana nokwakha itulo lokuzama ukubulala uNobhala we-ANC eFar North, eMkhanyakude.
UMnu Zakhele Khanyile (40), uMnu Nhlanhla Maseko noMnu Zakhele Dlamini (32) okuvela ukuthi ungowaseSwazini, baboshwe ezindaweni ezahlukene ngeledlu-le ngecala lokubopha itulo loku-bulala uMnu Thobelani Ncampha-lala obeyimeya yaseMtubatuba ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya obelumhla ka-1 kuLwezi (November).
UMnu Khanyile ugcinwe esiteshini samaphoyisa eDurban North, eThekwini, uMnu Maseko useQalakabusha, eMpangeni kanti uMnu Dlamini usesiteshini samaphoyisa aseMhlali, eThekwini.
ILANGA belikhona enkantolo ngesikhathi abasolwa bevele okokuqala. Abasolwa kuvele ukuthi baboshwe wuphiko lwamaphoyisa olubizwa ngeNational Task Team, olusebenzisana nabanye abaphenyi baKwaZulu-Natal.
UMnu Khanyile ungummeli ngokomsebenzi futhi usebenzela ezindaweni eziningi eThekwini, uMnu Maseko yena akuvelanga ukuthi uzinze kuphi kuleli kanti uMnu Dlamini yena waziwa kakhulu ezinhlakeni ze-ANC njengoba ebalwa nezishoshovu ebezithe-leka emihlanganweni yamagatsha aleli qembu zingamenywanga.
ILANGA lithole ukuthi bekungafanele kufike ngisho usuku lokhetho uMnu Ncamphalala esadla ahlamvana.
Engxoxweni ekhethekile neLA-NGA, uMnu Ncamphalala akafunanga ukwanda ngamazwi ngalolu daba, uthe lusazofika usuku lapho ubufakazi buzozwakala kahle bo-nke enkantolo. Uveze ukuthi lokhu kakukusha, sekunesikhathikuhlongozwa.
“Ngiyacabanga ukuthi bekuzobalula ukudukisa umkhondo ngoba bekungeke kwazeke ukuthi ngitholwe ngobani uma ngibulawa ukhetho lungakafiki,” kusho yena.
Umthombo weLANGA ulihlebele ukuthi abasolwa bebezokhokhe-lwa u-R1 million, kanti besebekhokheliwe u-R500 000 wokubakhu-thaza ukuba benze umsebenzi abaqashelwe wona.
Umgcinimafa we-ANC eMkhanyakude, uMnu Mandla Ndlela, uthe zikhona izinkinga kodwa banethemba lokuthi uzinzo luyogcina lukhona. Ubonge ukusebenza ngokuzikhandla kwamaphoyisa nokusukumela phezulu uma ethola imibiko yalolu daba.
“Okwamanje akukho okutheni esingakhuluma ngakho kakhulu, kodwa khona lesi yisimo esibucayi kakhulu. Sinovalo singabaholi ngoba kasazi ukuthi njengoba kufunwa unobhala oyinjini yeqembu, kuzolandela bani.
“Sethembe wona amaphoyisa ukuthi azophenya kugcine kuvela umnyombo wokuthi ngubani othume laba futhi kubangwani. Sizohlala sikhona enkantolo ukuyokweseka unobhala wethu kuze kube sekugcineni,” kusho uMnu Ndlela.
Uthe bazolinda kuze kufike esiphethweni sodaba, besebebiza umhlangano lapho bezochazela khona amalungu eqembu no-mphakathi ngezinyathelo abazozithatha uma kufanele.
Abasolwa kulindeleke ukuba babuyele enkantolo emuva kwezinsuku eziwu-7, okuyilapho kuyobe sekuyolalelwa khona isicelo sabo sebheyili.
Esinye sezizathu zalokhu wukuthi ummeli womsolwa wokuqala nowowesithathu, kufanele babenethuba lokuhlela kahle izinto zabo maqondana nezethulo okufanele bezenze uma sebeyofaka isicelo sebheyili.
Umsolwa wesibili yena akanaye ummeli futhi akashongo nokuthi uyamdinga yini noma uzozimela. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
Previous articleIDowns seyiphupha nge-treble kwiPSL
Next articleKasikaziwa isizathu sokubulawa kwenkosi